Italy again at risk for new infections as Italians go abroad for Easter | Italy travel news
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Italia » Italia atahorana ho tratry ny aretina vaovao indray satria ny Italiana mivoaka any ivelany ho an'ny Paska
Any Italia, ny olom-pirenena avy amin'ny "faritra mena" dia tsy afaka mandao ny tanànany mandritra ny fialantsasatry ny Paka, fa afaka mankany amin'ireo Nosy Canary any Espana izy ireo. Mety hafahafa sy mifanipaka izany, saingy izany no izy.
Na eo aza ny tsy ahafahan'ny olom-pirenen'i Italia ao amin'ny faritra mena miala ny vondrom-piarahamonin'izy ireo, afaka mandray fiaramanidina izy ireo ary mivezivezy any ivelany.
Ny jiro maintso dia nomena ho fitsangatsanganana any amin'ny nosy Canary, amin'izay ny Italianina dia afaka mivory mandritra ny Paka any.
Mangataka ny hahafantaran'ny mpandraharaha sy ny fikambanana mpizahatany ny antony tsy fialan-tsasatra ao an-trano?
Ny boriborintany iray avy amin'ny Minisiteran'ny Atitany dia nanamafy tamin'ny famaliana ny valin'ny fanontaniana napetrak'i Astoi Confindustria Viaggi, fikambanana iray izay misolo tena ny 90 isan-jaton'ny tsenan'ny fizahan-tany any Italia, momba ny fahazoana mamela ireo faritra iharan'ny fameperana ankehitriny, ny hetsiky ny mpandeha izay mikasa hankany amin'ny firenena vahiny misokatra sy "azo ampiasaina" ho an'ny fizahan-tany.
Ny mpikirakira fizahan-tany sasany dia nandray ireo lalantsara antsoina hoe "COVID-voasedra" - protokol izay mamela ireo izay mizaha toetra ratsy ny savony molekiola vita farafahakeliny 72 ora alohan'ny hidirany hivezivezy. Ny mpandraharaha sasany aza dia manome vola fanampiana ara-toekarena hanatanterahana ilay savony na mampiditra ny vidiny amin'ny vidin'ny fonosana ho fanampin'ny vidin'ny dokotera iray izay mifandray amin'ny mpizahatany alohan'ny hiverenany.
Raha fintinina izany dia misy lalantsara azo antoka ho an'ny mpizahatany izay miantoka amin'ny lafiny iray ny fiarovana ireo mpandeha ary etsy an-daniny, ny fiandohan'ny sehatra lehibe iray amin'ny toekarena.
Korontana sy fikorontanana
Ny jiro maitso ho an'ny fandehanana any amin'ny nosy Canary dia niteraka hetsi-panoherana nataon'ny hotely italianina, izay soloin'ny Federalberghi sy Confindustria Alberghi, izay nilaza fa nandray ny tsy rariny ny governemanta fepetra ho an'ny fetin'ny Paska, dia ny fanasaziana ireo sokajy fandraisana vahiny italiana.
Gaga ny hetsiky ny mpandraharaha mpizahatany sy ny fikambanan'ny mpivarotra ary ny olom-pirenena koa amin'ny fahalalahana mivezivezy any ivelany raha ny trano fandraisam-bahiny sy ny rafitra fandraisam-bahiny italiana manontolo dia najanona am-bolana maro noho ny fandrarana ny fivezivezena amin'ny faritra iray mankany amin'ny faritra hafa. Ny lojika fanaovana izay ahafahana manome alalana ny dia manerana ny sisin-tany ary miaraka amin'izay koa misoroka hetsika any Italia dia tsy misoratra anarana.
"Ny olona vita vaksiny na misy swab ratsy dia atahorana ho voan'ny areti-mifindra, noho izany ity lojika ity dia tsy maintsy ampiharina amin'ny fitsangatsanganana any Italia ihany koa, hanararaotana ny serivisy fizahan-tany rehetra, anisan'izany ny spaoro, ski, fivoriana, kongresy ary foara fivarotana." an'ny Federalberghi nasionaly, Bernabò Bocca. Hentitra ny filoham-pirenena mamahana ny resabe ho an'ny sehatra iray izay efa iharan'ny fisaratsarahana tsy lojika.